Dib Ula Soo Noqoshadii Madaxbanaanida S/land Waxuu Ahaa Go’aan Loo Aayay Oo La Mahadiyay | Marsa News
Dib Ula Soo Noqoshadii Madaxbanaanida S/land Waxuu Ahaa Go’aan Loo Aayay Oo La Mahadiyay
March 11, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Dhawaaqa dhiilada leh ee ka soo yeedhay maxamed baashe muu noqon mid guud ahaan ba ay jeclaysteen dhagaha shacbwaynaha reer somaliland, islamarkaana waxa ay ku noqotay mid amakaag iyo fajacba ku abuurtay.
Waxa ay badiba bulshadu iswaydiisay maxamed baashe oo daadaha qadiyada somaliland lagu difaacayo ka dhex muuqan jiray waxa marqudhaata ku kalifay inuu badalo waxii uu hore u aaminsanaa? taasi oo jawaabo iyo aragtiyo kala duwan ay bulshadu ka bixisay, wallow falcelinta aragtidaa gaaban ee maxamed baashe ay shacbiga reer somaliland ka midaysnaayeen oo ay si adag kaga wada jawaabeen, hadana waxa aan la garan karin waxa kalifay ee uu uga dhawaajiyay wax aan soconayn.
Hadaad eegto waraysigii ay la yeelatay idaacada somaliland la dirirka ah BBC-da, waxa uu maxamed baashe sheegayaa in ay somaliland fashilantay islamarkaana somaliyana fashilantay kadibna waxa uu ku taliyay in labada faashil la mideeyo si loo guulaysto ayuu yidhi
Hadaba hadii aad hadalkaasi u fiirsato dhugmana u yeelato waxa aad arkaysaa ama kaaga soo dhexbaxaysa in maxamed baashe garashadiisi foof-daran habaw ku dhacay oo waxa aan isqabanayn labada dhinac ee uu ku tilmaamay faashilka hadana uu yidhi hala mideeyo si guul loo gaadho waa laba kala fog wax fashilmay in la yidhaa guul ayaa lagu gaadhaya waa qaacido aan hore loo maqal
Qaddiyadda Somaliland iyo madax-banaanida ay la soo noqotay waxuu ahaa go’aan loo aayay lana mahadiyey tan iyo maalintii Burco 1991-kii lagaga dhawaaqay. Waxaa la badbaadiyay dhiiga dad badan kadib soo-af-jarridii colaadihii sokeeye, waxaa la dhisay dhamaan magaalooyinkii dhulka lala simay, waxa dib loo dhisay dugsiyaddii, waddooyinkii iyo xataa dadkii. dhibka iyo rafaadka badani ku habsaday.
Waxaa la dhisay ciidan ku dhow 30,000 oo askari, nabadgelyo taam ah, iyo calan ay dadku cisi iyo sharaf ku hoos noolaayeen 30 sanno. Waxaa dib loo unkay nidaam dawladeed oo dimuquraadi ah, waxa dalka ka hirgalay oo ka qabsoomay doorashooyin hogaanka dalka lagu soo doorto iyo golayaasha qarankaba.
In ka badan nus milyan caruura ayaa dugsiyada ku jira oo loo suurtagaliyay mustaqbal ka fiican ka aanay nasiibka u helin walaalaha Soomaaliya ee saacadkasta gumaadka iyo qaraxyadu ubadkooddu.
Guulahaas oo dhan cid dadku ka martiyay ma jirto, ciidan shisheeyana oo jamuuriyada dhidibada adag ku taagan kala shaqeeyayna daaba hadalkii waxse ay ku timid umad aayahooda ka tashaday oo isku duubni wada jira ku goaan qaatay ayaa keenay libintaa ilaa haatan lagu naaloonayo.